वर्षैभर विभीन्न सांस्कृतिक र धार्मिक पर्वहरु मनाईने हाँडीगाउँमा जात्राहरु धेरै नै हुन्छन र नै ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भन्ने ऊखान समेत नेपाली भाषामा प्रचलीत छ । यस्तै एउटा जात्रा आजको दिनमा आफ्नै घर-आँगनाम भएको थियो ।
जात्रा याने ‘यात्रा’ को अपभ्रशीत शब्दले नै जनाउँछ कि यो एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म भगावानको रथ वा खटको यात्रा हो ।
काठमाण्डौ महानगपालीकाको वडा नं ५ मा एउटा धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको पोखरी छ। ‘गहना खोज्ने पोखरी’ र बोलीचालीमा ‘गहना पोखरी’ पनि भनिने सो पोखरीमा प्रत्येक वर्षको वैशाख कृष्ण प्रतिपदाको दिनमा एउटा अत्यन्त धार्मिक महत्वको जात्रा हुन्छ । अँ त, यो जात्रा हो माता टुँडालदेवीको ।
किंबदन्ती अनुसार परापूर्व कालमा टुँडालदेवी माताले एक पटक यसै पोखरीमा स्नान गर्ने क्रममा वहाँका केही गहनाहरु यसै पोखरीमा हराएछन । तत् पश्चात प्रतेक वर्ष सोही दिनमा यहाँ सो गहना खोज्नको लागी माता टुँडालदेवीको प्रतिमालाई खटमा आरोहण गराई सो खट समेत नै यसै पोखरीमा हेलिन्छ ।
विभिन्न धर्ममा जात्रा वा यात्राका परम्परा भएपनि यसरी देवीको रथ नै पोखरी भित्र हुल्ने यो जात्रा भने एकदमै अनौठो र रोमाञ्चक हुन्छ । आजको पोस्टमा यही माता टुँडालदेवीको गहना खोज्ने जात्राका केही झलकहरु ।
(यहि हो प्रसिद्ध गहना खोज्ने पोखरी—जात्राको केही दिन अगाडि)
(माता टुँडालदेवीको खट उठाउँदै)
(यो खटलाई यसरी नै गाँउको परिक्रमा गराई पोखरि सम्म लगिन्छ
(परिक्रमाको क्रममा यसरी नै चदुवा राखेको मुनी खट रोकेर पुजा गर्ने चलन छ)
(गहना खोजेको हेर्ने प्रतिक्षारत दर्शनार्थिहरु)
(पोखरी भित्र रथ घुमाएर गहना खोज्दै)
(अन्तिम फोटो खिच्नेबेलामा भने हावा-हुरी आएर अचानक अध्याँरो भएको र भिडले गर्दा फोटो सफा आएन...अर्को साल ट्राई गर्नु पर्ला फेरि ! )
साँच्चै जापानमा पनि कहाँ हो करिब करिब यस्तै गरेर रथ पानी भित्र घुमाउने चाड हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ ...जापानमा बस्ने कोही साथिहरुलाई थाहा छ कि ?
Posted by Sujan Sharma9comments/ टिप्पणी
फोटो खिच्ने बिचार थिएन र फोटो खिच्ने तयारी पनि थिएन । क्यामरा नबोकी घरायसी कामको सिलसीलामा आज असन-इन्द्रचोक पुग्दा अचानक त्यहाँको दृश्यले मन खिच्यो । देशको राजधानी शहरको पुरानो र पारम्पारीक बजार क्षेत्र जहाँ नुन देखी सुनसम्म र खाद्यान्न देखि जडिबुटीसम्मको व्यापार हुन्छ, त्यहाँ पुग्दा केही तस्बिर उतार्नै मनलाग्यो र साथमा रहेको मोबाइल फोनबाट केही दृश्यहरु कैद गरें ।
हुन त देशमा आजकल ठूला ठूला सुपरमार्केट र डिपार्टमेण्टस्टोरहरु खुलेका छन, तैपनि हाम्रो पुरानो र प्यारो असन-ईन्द्रचोकले आफ्नो रौनक र वैभव दुबै अझै कायम राखेको छ । मसिनो गल्लीको दुबैतर्फ रहेका साना-ठुला ढीक र सटर भीत्र खोजेमा नभेटीने सामान सायदै होलान । त्यही विविधता, उपलब्धता र प्राचिनतासंगै जीउँदै रहेको यस्को लोकप्रियतालाई यही तस्विरकै माध्यमले भएपनि बाँढने प्रयास गर्दैछु । बेलामौकामा त्यही पुग्नेलाई सायदै केही नौलो नलाग्ला तर विदेशमा बस्नेहरुलाई भने सायद केही सम्झना र केही न्यानोपन दिन्छ कि यि तस्विरहरुले :
(असन-इन्द्रचोकको बयान माता अन्नपूर्णको मन्दिर विना त हुनै सक्दैन हैन र )
(इन्द्रचोकमा यात्री र सामान ढुवानीको पर्खाईमा रहेका रिक्साहरु)
(इन्द्रचोकबाट देखिने असनतर्फको दृश्य)
(काठमाडौंको जाडोबाट जोगाउने ओडनेको पारम्पारीक बजार)
( यो बाटोमा यस्ता बाँसुरी र मुरलीका ‘रुख’हरु पनि बराबर देखिइरहन्छन )
(श्वदेसी क्रेता र विदेशी पर्यटक सबैले खोजेका वस्तु पाईन्छन यहाँ)